Hayado dawli ah oo laga rari doono Stockholm muddooyinka dhow - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hayado dawli ah oo laga rari doono Stockholm muddooyinka dhow
La cusbooneeyay onsdag 30 augusti 2017 kl 12.44
La daabacay onsdag 30 augusti 2017 kl 10.25
Löfven: In dalka lagu baahiyo howlaha hayadaha
Stefan Löfven, hoggaamiyaha dawladda Sweden iyo Ardelan Shekarabi, wasiirka rayidka. sawir: Henrik Montgomery/TT
Maamulka dawladda Sweden ayaa go’aan ku gaaray in 7 hayadood howlahooda ama qayb ka mid ah laga raro Stockholm, loona raro magaalooyin kale, sida ay maanta shir jaraa’id ku soo ban-dhigeen magaalada Katrineholm madaxa dawladda Sweden Stefan Löfven iyo wasiirka bulshada rayidka Ardalan Shekarabi.
Hayadda liiska ugu horreeysa ayaa ah hayadda ammaanka shucaaca (Strålsäkerhetsmyndigheten), oo 120 ruux oo ka howl-gala loo wareejin doono magaalada Katrineholm, halkaasina oo howlaheeda la dhameeys-tiri doono bisha noveembar ee sannadka 2018.
Hayadaha kale ee dawladdu go’aanka ku gaartay in laga raro caasimadda Stockholm ayaa kala ah: Xog-haynta cilmi-baarista cirifyada adduunka oo loo rari doono magaalada Luleå, hayadda lafa-guridda dhaqanka oo loo rari doono Göteborg, hayadda dhallin-yarada iyo arrimmaha bulshada rayidka oo loo rari doono magaalada Växsjö, qaybo ka mid ah guddiga talada ee ESF-rådet (hayad miisaaniyad-gelisa mashruucyada la xiriira kor u qaadista wacyiga aqooneed ee hor-u-marka iyo is-dhex-galka) oo loo rari doono magaalada Gävle, qaybo ka mid ah guddiga talada ee jaamicadaha iyo tacliinta sare oo loo rari doono magaalada Visby iyo qaybo ka mid ah howlaha wakaaladda kobaca oo loo rari doono magaalada Östersund.
Guud ahaan ayey ka howl-galaan hayadaha la rareyo ayey ka howl-galaan shaqaale gaarsii-san 500-550.
Tiro ka badan
Waxaa sidoo kale lagu tallaab-san doonaa tallaabooyin dheeri ah sannadaha foodda innagu soo haya, sida uu sheegay Shekarabi:
-Howshan ma ahan mid dhammatay oo aannu ka fara xalaney. Halkeeda ayaannu ka sii wadi doonnaa meeleeynta hayadaha.
-In muddo ahba waxaa socday sidii degmooyinka iyo gobollada loo gaarsiin lahaa hoowlaha hayadaha oo aan lagu ekayn oo keliya magaalada Stockholm, sida uu sheegay madaxa dawladda Stefan Löfven (S) oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Katrinaholm.
Löfven ayaa dawladdii ka horreeysay ee garabka midig ku dhaleeceeyay inay ku mashquulsanayd un Stockholm.
Dawladda ayaa horay caasimadda uga rartay saddex hayadood, kuwaasina oo kala ahaa. Hayadda caafimaadka E-hälsomyndigheten oo loo rarey magaalada Kalmar, hayadda kormeerka ra’sumaalka aan guurin oo loo rarey magaalada Karlstad iyo hayadda xuquuqda qooyska iyo waalid-nimada oo loo rarey magaalada Skellefteå.